5 Imibuzo Beyonce — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
5 Imibuzo Beyonce
Umculo yinxalenye enkulu yobomi bam ngoko ndisoloko ndicinga ngendlela ukusebenzisa nto ingcono. Kunzima kum ukunandipha yobugcisa ngaphandle kuhlalutywa, ukuthatha amanqaku, bebuza imibuzo. Beyonce noqwalaselo isizwe sethu ngoku yaye ukuba yayingomnye iinkwenkwezi zethu pop eyona oyintanda. Eli nenekazi okuqala wathi ukuba abe ku nabani na ongomnye, ndimbuza bafuna ukuba Beyonce.
Beyonce ixhaphake kunaye nto wakha, ukuze ungaguqukeli umabonwakude okanye ukufumana Intanethi ngaphandle ebona nto ngayo, kuvandlakanyo album yakhe entsha ifoto yakhe ehamba phantsi esitratweni nentombi yakhe. Ndiyamthanda yi italente yakhe kwaye iphefumlelwe saqhutywa, kodwa mna kwakhona Amangaliswa ndibona izinto.
Beyonce ndiya kwenza ndineendawana ngokufanayo. Sicela kokubini eTexas, kwaye amaqashiso yentsapho Houston. Sicela zombini Amagcisa Ndiye wakhululwa ngeenxa inani elifanayo albums solo (nangona nje kancinane eyaziwa kakuhle ngaphezu kwam). okokugqibela, sibe sobabini aboni odinga ubabalo lukaThixo.
Unoko engqondweni, ukuba ndithe ndafumana ithuba ukuhlangabezana na kuyo ezi eminye imibuzo ukuze ucele, ezinye zazo ndiseyilaa esenza ngokwam.
1. Ucinga ukuba unempembelelo umculo wakho kubomi neemfundiso zabantu abatsha?
2. Umculo luhlobo mhle yokuthetha ukuzeyisa, apho sifumana ithuba ephalaza imbilini zethu, iingcinga, kunye neenkanuko. Kodwa izigidi zabantu umculo Ephantsi- njengoko elinesandi ebomini babo, kwaye ngekompas iimbono zabo zehlabathi. Njani ukulungelelanisa self ibinzana kwaye luxanduva kuni ngoxa influencer?
3. Ingaba ucinga ingqalelo usondela ubuhle bakho kunye nesini (leyo edla ephazamisa yobugcisa yakho) iyangquzulana umyalezo kwi iingoma ezifana, "pretty Kubuhlungu?” Kuloo ngoma, nibonakala ukuba ekukhuthazeni abafazana ukuba ukuzibulala efuna imfezeko, kwaye kujongwe imiphefumlo yabo kunokuba ancume zabo. Kodwa ngaba ucinga ukuba ukuphakama rhoqo umgangatho wethu beauty- apho ngokucacileyo imisebenzi kwiintlanganiso loo umyalezo?
4. Ingaba ikhona indlela ukubhiyozela sex ukutshata ngaphandle abanazo esidlangalaleni likabani ngobudoda bemlinga abanye yinkanuko?
5. Kutheni Jay-Z kwi amane zakhe kodwa liphole kunam?
Ezi nje embalwa imibuzo eza engqondweni phezolo. Ngaba guys kufuneka naziphi na iingcinga?
Arana Rafael • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:12 mna • impendulo
Chris • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:13 mna • impendulo
Siyabonga bhuti ngokuba noxanduva ngokwaneleyo ukuze ungacimi uhlaselo. izithuba ezininzi ndiye ndabona kumaKristu iye yaba nomsindo yaye semizamo.
TransformNotConform • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 9:29 pm • impendulo
Oku ndiyavuya ukubona. AmaKristu musa nje ngoyaba iingxaki okanye nje bonke kuhlasela abantu umkhwazo apho “Ukuyihamba kwakho esihogweni.” ukubacaphukisa nje ukuba jonga kakuhle into abathi kwaye senze njani. #CauseSomethingSureAintAddingUp Ndiyabulela uhambo
Broc • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:14 mna • impendulo
Ndicela ngaye kwaye umyeni wakhe kunye Illuminati. kodwa #5 ukuba me kaloliwe haha
Julia • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:15 mna • impendulo
Ndiyayithanda indlela ayibeka imibuzo yakho. Yena nempembelelo kakhulu onke amantombazana abaselula nje kwaye unaso isiphiwo kakhulu. Kodwa uyavuma, maxa wambi italente yakhe labasibekela ngokuxhentsa okanye ukungabi iimpahla.
Andrew haha ​​Ross • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:17 mna • impendulo
Ndandikuthanda ukuba yenziwe njani into ebeniyicelile ngendlela enothando kodwa eyakhayo. beyonce & nezinye nosaziwayo ezi kwindawo egqibeleleyo ukuba kubekho abantu abangumzekelo omhle kulutsha lwethu, kodwa uninzi siyasilela iziphiwo zabo ngokupheleleyo. Kufuneka siqhubeke sithandazela ukuba. Ithemba wonke umntu. Qhubeka ukwenza into yakho uBukumkani!
JasmineArogundade • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:19 mna • impendulo
Ndicinga ukuba le yindlela ebalaseleyo ukubuza imibuzo. uguqulelo wam kubo usenokuba bit ekhubekisayo ichama lol. Siyabulela ngokuba ngumzekelo & ukusebenza imihla ukuvula abantu’ engqondweni kuKristu / iinkolelo
Debbi • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:22 mna • impendulo
Ndiyabulela kuwe ngenxa yoku.
Kumaxesha amandulo • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:25 mna • impendulo
HLEKA KAKHULU @ #5. kodwa ngenye, imibuzo legit kuba phantse wonke kunye nabani na okanye zokufuna icandelo lezomculo.
JonReagan • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:25 mna • impendulo
Bendicinga lawo okulungileyo kwaye mhlawumbi ndicinga ingqondo kodwa khumbula zingamandla kaThixo okusindisa. Ndingathanda ukuba iVangeli olunyulu ukuba thaca kuye yaye uMoya oyiNgcwele ambonise isiphoso iindlela zakhe njengoko liye sonke. kungenjalo, Andazi kutheni uza kunyamekela ukutshintsha. Kunjalo nje, wena ezipholileyo indlela kunokuba JayZ. Way kupholile!
Olivia • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:56 mna • impendulo
I sesibili- indlela kupholile! :-)
Tenyll • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 1:00 pm • impendulo
Leila. di • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:27 mna • impendulo
Ezi yonke imibuzo ezinkulu!!!!!!
#5 nakuba.. hleka kakhulu
JesiliaRose • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:29 mna • impendulo
Le yimibuzo NGOKUGQWESILEYO Trip Lee. Khawucinge ukuba malunga nexesha siyeka ethethelela umculo wakhe ingakumbi amaKristu phulaphula izinto yakhe. Oku kakuhle!
P.S. nesoka wathi “nah, wena ezipholileyo kwe Jay-Z.” :) UThixo anisikelele bhuti.
Michelle • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:29 mna • impendulo
Mna kudala uBeyoncé. Yena Intle abanamakhono. Mna ke nzulu ulwalamano lwam noThixo. Nangona Ndiyawuthanda lo nenekazi, I Musani ukumphulaphula umculo wakhe kwakhona ngenxa yokuba uhlobo ngqo olufanayo iimvakalelo imibuzo yakho lubonakalisa. Ndiyathemba ukuba ufumane ithuba lokuba ndibuze kuyo le kuba bendiya uthanda ukuva iimpendulo zakhe kwaye ubone indlela Kuhlola ubomi bakhe. I akukho ukwahlulelwa; I nje Kazi kuqhubeka ntoni ebomini bakhe. Ndiyabulela kuwe ngenxa yoku.
Frank Gil • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:31 mna • impendulo
Lo mbuzo wokugqibela nakuba.
uluhlu Great. Ndingathanda ukuva impendulo yakhe #3. awesome uhambo!
Justin • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:34 mna • impendulo
Ndiyayithanda le mibuzo. Wenza umsebenzi eyoyikekayo sokuthetha imibuzo enzulu ukuba uninzi kuthi ngenxa yakhe ukuba ndacinga kakuhle kakhulu ngaphandle, indlela nenkathalo. Wena likhuthaze mna kunye nabanye abaninzi. Ngethemba blog yakho wachukumisa umntu (I Siyazi ngeke). Ngubani owaziyo, mhlawumbi oko kukulungiselela ukuze Beyonce!
Zaeria • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:36 mna • impendulo
Ndingathanda ukwazi, ntoni okanye ukuba naziphi na imida ziye ngokobuqu ezimiselwe luxanduva lwakho yemfundiso kwisizukulwana yanamhlanje. Ukuba kunjalo, njani uyiphatha? Ukuba akukho njalo, ngoba? (apho uhlobo kwiSabi bawushiyile umbuzo #2)
SusanBonnerDunston • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:40 mna • impendulo
Lihle ilizwi Uhambo! Bendikwazi wena umfana oluyinene lukaThixo, xa ndithe ndakuva kuqala e North Carolina
Olivia • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:43 mna • impendulo
Enkosi iposi yakho. Kutshanje ndiye ndafumana ividiyo ocacisa lukhulu ngaye, nge “naye” ndibalisa phenyo (Sasha evuthayo) nendlela athi adanise enkundleni. Ndaqala ukubukela yeGrammy ngayo abantwana bam xa waqalisa dancing i yandicenga ukutshintsha isikhululo. Xa kufakwa kulo info kwenye isayithi echaza nje kufuneka silumke yintoni ukujonga abantwana bethu nabo abayithanda, I ruffled lukhulu iintsiba. Ndiba ke buhlungu ngendlela inobuqhophololo utshaba usebenzisa abantu, iindawo nezinto ndide ndimane yehla ngqwabalala. Andifuni kwaye Ndifunda kunjalo. Oku kubeka KAKHULU kakuhle umzalwana.
Timoti Brown • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:43 mna • impendulo
Uye lowu ukuba ungumKristu izihlandlo ezininzi, ngaba uvakalelwa kukuba umculo nivelisa lumelo kaKristu kuwe.
Rhionah • EyoMqungu 31, 2014 ngexesha 5:08 mna • impendulo
Mna ke nawe kule ntombazanyana.
Tiheasha • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:43 mna • impendulo
Amen, ubonga le! Mna ezenza sitshutshiswa zezam “usapho” oodade kunye nabazalwana kuKristu… ngokuba kokubuza imibuzo efanayo kunye neenkxalabo kwinqaku yam yakutshanje kwi uBeyoncé. Kodwa mna ndithandaza ukuba uThixo uzukisiwe enoba yintoni.
Cindy • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:48 mna • impendulo
Lihle okanye ucele, ngcono kodwa.
Ruthie • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:49 mna • impendulo
Uthando imibuzo enzima. Ndakhe ndiyibonile wena Jay-Z, kwaye abavumelani. Qhubeka ukuze abe ngumzekelo. Musa ukukhangela emva! Qhubeka ufuna Up! Vumela ubomi bakho Makabongwe uThixo! Wena kunye Cross Movement uncedo ukukhulisa abantwana bam. Ndiya ngonaphakade kuba nombulelo.
Allen • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:49 mna • impendulo
Ndiza ukukholelwa ukuba le mibuzo iya kuphendulwa uBeyoncé ngokwakhe imini enye. Ndiyayithanda indlela abeka kunye nobunzulu wokufika intliziyo isisusa “Ngoba”
Alexis • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:52 mna • impendulo
Beyonce okanye engeno eze kuyo le post, le mibuzo, okanye ebomini bakho. I kakhulu ukuthi ndimbuza uphendule le mibuzo okanye banakekele. Isibakala sokuba le mibuzo kufuneka wabuza eminye kweesiginali ukungaphikisani ukuba okanye hayi usenokuvakalelwa dilesi.
Isenokuba nje kuqwalaselwa art eliphezulu, kodwa ndicinga ukuba kuza uxanduva olukhulu. Umntu nabadumileyo yakhe wakha umsebenzi wakhe ngezi kuphikisana, ibe iqhubeka ekuhambiseni kuye. Ndicinga kukho ithemba imibuzo, ukuba ukuze isigqibo ukuba bacinge ngawo. Ngethemba uya kuba n indawo kwinqanaba elithile ebomini bakhe ukuze babe. Ndiyavuya babuzwa.
nicky • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:55 mna • impendulo
Ndiyazithanda imibuzo yakho. Abayi iyandoyikisa kwaye ingqondo. Ndiyaqonda ukuba ukuba kukho othile kunzima nokuba baye ubomi zabo ngaphandle kweliso elibukhali. I wonder na ukuba bayaqonda ukuba ngenxa yezikhundla zabo benza ngaso ngundaba-mlonyeni. Abaninzi yomculi ukuzithethelela umsebenzi wabo ngokuthi ukuba “zokuzonwabisa nje.” Bendiya Ndifuna ukwazi kuye ubani “kube kukuzonwabisa nje” isiphelo? ngokunjalo, ukuba ngokuba ongumzekelo ntoni waqonda ukuba ehoyene umonakalo umculo lakhe(yena ngenkuthalo wavuma ukuba sikhundla xa etyelela izikolo ethetha ukuba abantwana)?
OfficiallySmilez • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 12:07 pm • impendulo
Le mibuzo sum of alot amakholwa iingcinga; amakholwa abo bahlala non-phandle le questionables abo esemehlweni. Ndicinga kakhulu, sikhawuleza ukutsalela ingqalelo umonakalo amanye amagcisa okanye abantu ngokubanzi siyazi ukuba akukho kuphela ungasuki njengokuba ngokumgweba kodwa ezigwebayo… Kuba ngubani na thina???. Kodwa le mibuzo wenza nje eyahlukileyo. Ukuba Beyonce babeza ukuphendula le mibuzo, yena, yena, mna ndiyakholwa ngaphandle kwamathandabuzo, baqala ukubona ukuba thina sonke nje, umbonile; nje ngokuphendula le mibuzo.
Awesome and ezihlekisayo (umbuzo malunga J.Z) :)
kym • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 12:15 pm • impendulo
Andivumi. Wena ezipholileyo kwe Jay Z …ubafundisayo kwaye ikhuthaze amadoda abatsha umamele umculo wakho ukuba ibe ngcono…baphile ngcono…abathanda uJesu….bathande iintsapho zabo kwaye bakhule babe ngamadoda standard…ngoku thats cool. Beyonce luhle kwaye ke italente ingoma yakhe iya….”I Mhlawumbi sisebatsha kodwa im ukulungele”….ikhuthaza amantombazana aselula ukuba kubanikela inkanuko ngesondo ngaphandle okanye ezomtshato… yam 13 Umtshana wayecula it..smh. Kungani ukukhuthaza isono?
Chim Chalera • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 12:17 pm • impendulo
Wow oku eyoyikekayo Ndiyathemba ukuba loo amagcisa uhambo ithuba kufuneka amagcisa onjengawe ukulolonga kumacala azo nangona mna ndigqiba ukuba yonke loo mibuzo eneneni wabuza uza konwaba ngenye into agood bacinga yonke loo mibuzo kufanelekile ukuba bonke abaculi phandle phaya efanayo beyonce.
michael III • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 12:19 pm • impendulo
Ngathanda le hambo. #5 waba me onenombolo. Kodwa ezi okukhulu imibuzo eshukumisa. Kunye nenkqubo yamagcisa amanye esikolweni neyeBhayibhile imfuneko ukubuza themseleves lonke ixesha babeka eyichukumisa kokugqiba kwi track.
Mhlawumbi uya kubona oku aze ayiphendule kuwe :)
Johnnie K • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 12:28 pm • impendulo
uhambo – imibuzo awesome, kwaye kungathi ngokugqibeleleyo, Bro! Ndaphantse kwafuneka eme aze aphume kwigumbi lam yokuhlala ezifana uNatalie Grant enza le show. I wabukela le show kuphela ngenxa zam 13 konyaka ubudala wayefuna, yaye ndandifuna ukubona oko kwenzekayo ehlabathini umculo, njengoko lumiselwe libe becala 10 Kwiminyaka eyadlulayo. Babe 2 ngomdlalo ukuba athi, “Oh, oko jam yam!” – Robin Ama ke Cosa. Kwafuneka ukubuza unyana wam ukuba wayesazi ukuba ezo iingoma bangaba njengam malunga, wathi yena wayesazi kodwa ndingayi kukuxelela ukuba (ngesondo kunye nabafazi objectifying.) Ngoko ke kukho kwicala flip ukuya iingoma ababhinqileyo. Beyonce and ezinye iimvumi ababhinqileyo’ iingoma kukhokelela abafazi evakalisa ubuni babo yaye ke objectified. Yinto umjikelezo ebuhlungu yesono ekhokelela abantwana abaninzi gqitha abazali nga khathali ezintsha esizifumanisayo, kuba ulwalamano lwabo olusekelwe inkanuko… Ngenye indlela, Ndiye bashumayela ngokwaneleyo, umsebenzi omhle, uwuthanda umculo wakho! – J
Alexis • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 12:32 pm • impendulo
Linda nakuba… njani isifo kwakho ekuqaleni nje #5 kulo luhlu! HLEKA KAKHULU
Michael • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 12:36 pm • impendulo
Ndingathanda ukubuza ukuba kutheni ugqibe ukuba imvumi wenza umculo wezwe. Ndiyazi ukuba waba imvelaphi ongumKristu, kodwa lowo ungenako kundenza ndizive ngcono. yena, njengabanye abaninzi, ke isikhundla ukuba enkulu indima-imifuziselo kodwa bakhetha ukuba nje ethandwayo kunokuba. Ndiyayicaphukela umgangatho sizibekela namhlanje njengoko baseMerika, ingakumbi ulutsha.
On kunothi lula, uwuthanda umculo wakho. Kufuneka wenze enye ingoma kunye Jimmy Nedum…..okanye nantoni na igama lakhe. Hleka kakhulu! imibuzo Good tho.
Nicole • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 12:47 pm • impendulo
Ngoko ke ndaba nje ukuba ndithi ukufunda oku Trip okusemandleni Lee izwi….Anyways, le eminye imibuzo ezoyikekayo! Ndingathanda ukubona lo dliwano!!
Juanb • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 1:26 pm • impendulo
Trip Lee! Ndiyazi ukuba mhlawumbi ufumana itoni yabantu ungxola kwi ya kodwa mna nje ndifuna ukuthetha ubomi bakho nomculo waba ukhuthazo enkulu nentsikelelo ukuba uhambo lwam noYesu. On ingxoxo yakho, I ewuthanda yonke imibuzo. #4 wanamathela ukuba kum. (yaye ezi Ndiyaqonda ukuba ilizwi encinane nje iimbono zam) Ndiyakholwa kukho yindlela yokubhiyozela ubomi bomtshato. Ke njengomlandeli kaYesu, ukukhathalela bam kuba ukuba amakholwa babengayi injezu nezesondo zabo. Kunzima kum ukubona intliziyo kaYesu’ umculo omnye / ubomi xa uninzi ixesha ubabona nangegunya ubuni babo. Akukho thando ukuba. Nje ithuba isilingo. Kufuneka ukuba ubani aqwalasele idumisa ngayo iNkosi kunye nabazalwana abangoogxa babo kunye sisters.But ke kwakhona, ukuba uhlobo lothando ngokuqwalaselwa livela ngokwembono christian.
uJoanna • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 1:37 pm • impendulo
Yess, I love umbuzo #3!!! Its kanye oko bendikhe bezibuza kakhulu!
Keisha • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 1:45 pm • impendulo
Itshiwo kakuhle….ndine 1 nendodana 3 amantombazana kunye ndiyavuya soo ukuba Mna ndimvelisile ukuba ujonga kwi igcisa yi iziqhamo imisebenzi yabo. Ukuba oko ukudala abakwazi ezizalisekisa ilizwi likaThixo. Ngaba ufuna ukuba ukondla umoya wakho? Ndicinga ukuba kupholile INDLELA NGAPHANDLE Jay-Z.
Nikki • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 2:08 pm • impendulo
Wena ezipholileyo INDLELA kwe Jay-Z! Umdla ukuba kufakwa kulo namhlanje. Ndafika lonke B yokuzonwabisa, “Into egqibelele endingazange ndibenayo,” ngobusuku bokugqibela on youtube ngexesha sidlulele iingoma ezithile-80. (??!!) Laqala naye lingerie ezimhlophe, ukuba ungakwazi noba ukubiza ukuba. Intliziyo yam buhlungu njengoko ndabaphaphelayo ukuba! Yinto ebuhlungu kakhulu ukumbona & abaninzi kangaka nezinye ezintle & Amagcisa emangalisayo bazithengise nge sex & bebukisa ucansi. nokuba, Kufuneka ucele, apho amadoda ebomini babo? Apho ngooyise & abayeni? Ukuba uyihlo na B KUNYE Jay-Z ibe “ekulweni” kuba naye konke ukuba? Ngaba ke ukuba ukukhusela wakhe & bandibekayo yakhe yonke into kubo? Ndiza kuqala bathi abafazi kufuneka uyeke nangegunya ngokwabo, kodwa nam ndiya umngeni amadoda ukwandisa ku nembasa & ukuqala imbeko abafazi. Makhe ukudala uluntu apho neyayo abafazi & mbasa ngenxa UBUHLE yabo TRUE & apho OHLONITSHWAYO amadoda. Ndiza suka ibhokisi yam isepha ngoku. :)
Pamela • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 2:18 pm • impendulo
Itshiwo kakuhle…Kwafuneka ndizibuze le mibuzo kwaye zisebenza sonke unguye njengemvumi okanye, nje ubomi umntu ebomini bakho lisoloko ukubukela kunye umntu nabo esithi ndifuna ukufana ukuba xa wayekhulile. Ngoko ke, qiniseka ukuba ngokwenene uthiwa Kristu ezifana, wenza izinto amele uKristu, thats isizathu sokuba ndikholelwe abanye abantu abaninzi abaselula bexakwe, ukuba baya landela lowo. Ndiyathemba yawo uYesu Kristu yena kuphela, kungenjalo siza kuqhubeka baqondise emhadini. Thina sonke ngezenzo zethu, ngenxa yokuba izenzo zithetha ngaphezulu kunamazwi. iimvumi ezininzi abaqale ecaweni hamba uye ihlabathi ngenxa yokuba musa ukuxhasa umculo wethu christian. – Ngaba uthando ukuva iimpendulo zakhe kodwa okubalulekileyo angathanda ukuba babuyele kuYesu.
Virgil • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 2:20 pm • impendulo
Jay -Z ayikho ndawo ikufuphi ezipholileyo ke Trip Lee!
Chelbia • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 2:46 pm • impendulo
Ithemba ngenye imini uya kusebenzisa italente yakhe uThixo wamnika kwindawo yokuqala….ukuba badumise dumisa kuphela. Yena ke omu ukukhonza uThixo kusetyenziswa Kingdom Bakhe. UMtyholi weba. Ngamana uThixo gracefull kuye.
Emnye • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 2:47 pm • impendulo
Okokuqala zonke ndiyamthanda Uhambo yakho yezwi!!! Yeah ilizwi lakho lol wena haha! Malunga imibuzo ndiyamthanda umbuzo 4 kwaye 5 kuba hilarious, akukho Trip wena ezipholileyo.. Ndicinga ukuba sibuza uthando olungaka kunye ubabalo nobulumko.. Umsebenzi omhle.. Kwaye wanga uYesu kunceda nje Beyonce kodwa abaninzi kuthi makholwa.. I Musani ukumphulaphula umculo kwakhe bao ngakumbi..
tony • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 3:54 pm • impendulo
Into yokuqala yintoni na eqhuba? Umntu uya mhlawumbi ukuvelisa imizimba yazo ukuze ubulungisa okanye ukungalungi. Akukho mfuneko yokuba akukho sugar idyasi. Kukho indlela ebonakala tye phambi komntu, kodwa ukuphela kwayo ukufa. Ewe thina bangaboni yaye kufuneka uMsindisi, kodwa ixesha elide kangakanani siqhubeka amanzi imiyalezo?? Ngaba ukuba efanayo ibandla laseKorinte uPawulos wayilungisa? Inyaniso kufuneka ukuba kuthethwa.
ukuthweswa • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 4:19 pm • impendulo
imibuzo yakho echo abo Ndiye babethanda ukumbuza, naye ngokunjalo. I Singathanda ukuva iimpendulo zakhe zale mibuzo ngentlonelo elimsulwa. Ndingathanda kwakhona ukufaka “Njani ecacileyo lyrics zakho zibonisa ukuba izinto zobuqu?” kwaye “Uninzi iingoma zakho ezintsha Siliphakamise kunye ngesondo, umzimba wakho kunye nezesondo yakho. Ngaba ukhe wacinga ukubhala ingoma yokudumisa uThixo wamsikelela wena umnikelo wakho kuhlabela ukonwabisa?” kwaye YES!..wena ngokuqinisekileyo kupholile, a weengoma engcono kakhulu, kunye umzekelo ngokwenene “Ubomi Good”! Ndiyithanda kakhulu umculo wakho!
Kruseaphix • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 4:25 pm • impendulo
uhambo yo! Lihle ilizwi / wabuza kwaye ndicinga ixesha zayo cuz imiba artistes eziphembelela ubomi intsha nabantu abangazange baye abaninzi abadinga yokubuza. Days emva, Ndeva izimvo ukusuka thug slim owathi “nawuphi na kid enze oko wathi ingoma yakhe ke akazange avuke eyiyo” yaye kwaba ngathi whaaa?! Uthi ukuba nje othile nokuba up yayo abantwana oko bakufundayo yaye mna ngathi, “utitshala athi ngokunjalo,umsebenzi wam soKufundisa kodwa nabafundi bam banoxanduva oko bakufundayo?.” jose Its nje crazy. Bathandwa yonke imibuzo njengoko kwenza ukuba ukhakhayi for Bey kunye elide ukubona basindiswe yayo. Ndiya ingqwalasela oku post yam olandelayo ukuze y'all khangela phezulu kruseaphix.wordpress.com
John Mansaray • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 4:36 pm • impendulo
Le kaSisera elungileyo; avelayo kuthi abalandeli bakho kakhulu kukuba ayiqhelekanga. ngokwesiqhelo, iinkokeli zithanda ukugcina umgangatho yekratshi kunye noludumileyo abalandeli babo. Kodwa le post ibonakala kangangokuba isikhuthaza ukuba ukholo lwamaKristu konke ngokunyamezela. Akwaba kuba nako ukubeka iimvakalelo zam kanye ngale posi amagama, kodwa le’ kufutshane nje ndikwazi. Enkosi.
Gteqnix • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 4:40 pm • impendulo
uhambo yo, imibuzo emihle. Ngokwenene don ukuthini nothin ukuba Ukuphendula okanye hayi ingongoma u wenza ingongoma ur. Ngubani na ke fan abeza kufuneka inkathalo ngokwaneleyo ukuba ukhombe kuye…anit uhambo trippin Bůh, khethe ndlela HOT kakhulu ukuba opholileyo Jay aint on ur league…
Vicky • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 5:40 pm • impendulo
“Nkosi, ubuya kwenza incoko phakathi Trip kunye B afezeke?”
uGary • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 6:05 pm • impendulo
Ndiyayithanda.. kunye nenombolo 5 HLEKA KAKHULU
JOECLER • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 7:34 pm • impendulo
uhambo umbuzo enzulu nabalungileyo.
Allison • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 7:34 pm • impendulo
Ndicinga ukuba le mibuzo zinyaniseke ngokufuthi i wonder ngoku ukuba yena nguye umama ukuba kwakuza kubakho ezinye zenzeke non. Yena unentombi Olinda yakhe kwakunye nathi ukuba sibavumela. Ndabona ezithile apho kwi-intanethi ukuba uthe ebona odumileyo ukuya .i ecaweni bayiqonde ngokwenene 1.1.Six kunye Reach Records kuba siya kuba nantoni na ukuphulaphula to.God Bless y'all
John • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 8:34 pm • impendulo
Yena idinga uYesu. Kodwa ukuba enze ukuba eyenze ukuba anike ubomi bakhe kuye. Kakhulu ukuthi uza kuba ukulungele ukuncama uzuko lakhe kuye. Kodwa ukuba wenza wow oko kunefuthe kungenzeka ukuba ubukumkani.
Ndine mabathandaze ngob yena wenza. Thina sonke kufanele.
uNatalie • EyoMdumba 1, 2014 ngexesha 5:13 pm • impendulo
JennB • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 8:51 pm • impendulo
nentsingiselo yam lobuqu inkcazelo yegama elithi “kuhle” ayibhekiseli Jay Z…. #SorryNotSorry
Ms Gee • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 9:00 pm • impendulo
Trip Lee, nangona ndandicinga le mibuzo isihlobo ekukhanyeni uhlobo lobugcisa lomculo, kodwa mhlawumbi mna ngandlel ngokuqinileyo. zomgunyathi imibuzo, Ngokoluvo lwam musa ukuqhuba ekhaya lo msebenzi ukuba eyenza ukuba ngumKristu (ubuncinane Ndicinga lo msebenzi wakhe ngokomgaqo kubandakanyo zakhe ne St. John UMC).
ngokukodwa…Ucinga ukuba abanempembelelo umculo wakho ubomi kunye neemfundiso amantombazana kunye namabhinqa?
JSok • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 9:15 pm • impendulo
Trip igama Good. Ndiyayibulela ezininzi izimvo. Kuyakhuthaza ukubona amaKristu kakhulu bacinga kwaye basebenzisane yintoni inkcubeko ethandwayo osimeleyo kubo. Mthande site Bro, ethandazela ukuba uNkulunkulu ukuqhubeka kusikelela inkonzo yakho.
Ukunciphisa Cole • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 9:59 pm • impendulo
ndithi, yilento iyiyo. Uvumelekile ukuba owakho umbono. Like uthe,”nobabini sinesono yaye odinga ubabalo lukaThixo”. Umahluko kukuba, Uyazi ukuba yintoni na iLizwi lithi and Beyonce akafuni. Thandazela ukuba abalahlekileyo ukuba baguquke, babuya ezindleleni zabo ezimbi. Tripp, ugcine up umsebenzi olungileyo uze ubathobele kuYesu Krestu
ABROWN • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 10:23 pm • impendulo
imibuzo Good! Njengoko ndandibukele intsebenzo yakhe yakutshanje yeGrammy, Ndadana, nokuba buhlungu. Njengoko ndandicinga ngalo, Ndzi sungule ku va nosizi ngenxa yakhe, kuba ndisazi waye engabandakanywanga ngumyeni wakhe. uthando Real ihlanganisa, oko kuba nawe ubuze umfazi wakho zaziswe ehlabathini.
UNOTHI • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 10:51 pm • impendulo
Ndiyayithanda indlela oku kubhalwe. imibuzo Good kwenziwa ngothando, umzalwana kwenziwe kakuhle ! #wakhuthaza
Chepe • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:52 pm • impendulo
Le mibuzo kakhulu Ndiyathemba ndeva malunga naloo nto. Yimbuzwano ehlonelwayo yaye abanyanisekileyo abantu abaninzi abakuthandayo art bayo.
kimeka • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 12:21 mna • impendulo
kakuhle na umntu uthobekileyo ndiyifundile malunga malunga Bey zonke nyanga elide. Enkosi ukuzibekela lo ngumzekelo omhle.
Chelbia • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 5:34 mna • impendulo
Ndandidla ukumphulaphula, bcz ndiyamthanda ilizwi lakhe kangaka! kodwa ngoku bonke umculo wakhe waphuma endlwini yam bcz yena ukukhuthaza ukuziphatha ngokwesondo, ukuxhaphaza, nokuziphatha ukuvukela. Kukho imimoya basebenze ububi kumkhombe ukuba influance amantombazana aselula kakhulu ukususela ekuqaleni. Its buhlungu kufuneka ukukhusela intombi yam 5 zeminyaka ubudala amanina entle kakhulu kwaye unesiphiwo ngubani yaye kufuneka ibe abafazi kaThixo kodwa ngoku isetyenziselwa ubukumkani lobumnyama. Abanye amaxesha ndandiye ndithandabuze ukuba ngaba uyayazi le nto okanye hayi? Mhlawumbi kwaye mhlawumbi ngaphakathi kwakhe yena uyazi kakuhle ukuba elalahleka… kodwa ndicinga ukuba lifana prisoner..there akukho indlela elula yokuphuma kuye… Kuphela uYesu offcourse! Aka Sithandazela ukuba ummangaliso! Ngamana uThixo wakubabala kuye!
uRakeli • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 6:27 mna • impendulo
Ndivumelana Trip Lee, NGAPHANDLE…. Ukuba nguye lukhulu ebandayo kwe Jay-Z… Kwakhona ngengqiqo uza kuba emthunzini obandayo uSomandla ngaphezu esihogweni eshushu ;)
herblessedseeds zakhe • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 9:10 mna • impendulo
Ndiyaluthanda umnqweno ukuqala le ngxoxo nge Wothando ngethemba kukuzuza ezithile nesigwebo nenyaniso evela self once ezibhengeziweyo christian uBeyoncé. Le ngxoxo kufuneka ukuqhubeka , kunye ngokwethu , AmaKristu kanye wonke . akunyanzelekanga ukuba ukunyanzela inyaniso , ndilutyale yinqakrzaze . Sylvia Fanali herblessedseeds, on Facebook no Instagram
uVicki pizazzi • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 9:14 mna • impendulo
I love Trip Lee.
PJ • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 9:59 mna • impendulo
Wowu! Oku kuhle kakhulu! Ngqo ukuya kwindawo, kodwa kunjalo nentlonelo. Ndazi lukhulu kuthi badidekile oko kwenzeka uBeyoncé thina maKristu ngathi ukuba ngaso ukuba yokupasa ngenxa yakhe “ukholo”.
Taniqua • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 11:53 mna • impendulo
Imibuzo zakho zindenzile ucinge ngendlela I ngayo Beyonce. I andicingi emdala unekhono kakhulu. I ahloniphe wezandla zakhe. Ndiya uyazibuza ukuba uza kuyiphendula le mibuzo. Kungaba umdla. kwindawo enkulu malunga pretty ibuhlungu ingoma. Ixelela amantombazana ukuba ukuzibulala ukuba nigqibelele, kodwa lahlangana indalo standard yogqibelelo….. Hmmm eyenza umntu ucinga.
diggity • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 12:11 pm • impendulo
i like umbuzo wakho questions.but 5 uveza ukuba wakuba udlule 40 ukuba nzima khangela epholileyo okanye be cool .Mna don bacinga thats a Inkolelo elifanelekileyo…ngokucacileyo
RichieBeadle • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 12:49 pm • impendulo
imibuzo Great, uhambo! Kwaye nje kwenzeka ukuba ukufunda le njengoko ezinye hambo-tunes ziphuma headset lokudlala yam!
Imibuzo zakho zibonisa ubunzulu, inkxalabo lokwenene novakalelo, kwaye kubonakala ukuba kuza ukusuka kwindawo abalondoloza. Kodwa kutheni na le Mega-superstar ukufunda imibuzo yakho nakuba, Yobeka phi ukuyiphendula? kakuhle – ngombono yam – kufanele, ngokuba akuyi ucela into yakhe musa uzibuze!
Yintoni isiqinisekiso? kakuhle, Ndiza ukumamela ngoku…”Lifikile ixesha lokuzihlolisisa, kufuneka sibe self-examination, lixesha lokuzihlolisisa, kufuneka sibe self-examination mhlawumbi!”
Yijonge Beyonce! Nawe, Jay-Z! (Ibizwa ngokuba ngu-Self Examination) :-)
Cinth • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 5:28 pm • impendulo
Hey uhambo, imibuzo yakho elula, kodwa ingqondo. Ukuba akunjalo umfundi ingqiqo analysis self kunye nabo, uxanduva ukuze baphile ubomi bethu kokuzifaneleyo iindaba ezilungileyo esiye samkela kwaye bamkele ngemihla, kodwa akazange aphume indawo nakratshi, kodwa sihlala ukuthobeka nothando. uthando. uthando. uthando. Uthando olunyulu unamandla ngaphezu engcwabeni. i dont ukwazi isizathu okanye yintoni eyenza beyonce elithozamisayo benze izinto yena wenza. kodwa zibizwa ukuba ukuthanda bandiqumbise ukuba umthande, nikhonze. kwaye i ucinga ukubuza imibuzo ephathelele kwi izinto intliziyo elungileyo ukuba intliziyo. kwaye kuhle ukuba bandiqumbise ;)
p.s Jay Z opholileyo kakhulu umntu yesikolo
Bethany • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 6:02 pm • impendulo
I gotta ndithi,umsebenzi omhle kule nqaku. Mna ndiqhele gqitha ukuva abantu ukunqgubanisa kuye,kodwa ukukuva ngokwenene ukubuza imibuzo ngokunyanisekileyo ukuba ngamanye amaxesha ndicinga ngayo xa ndibona yakhe. Mna okunene akayi ukufunda eli nqaku kuba nje ndidiniwe abantu kwenduku. iingcinga Good.
ukuya • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 8:06 pm • impendulo
Nina ngoko ontliziyo ithambileyo ad uhlobo! Uthando lukaThixo luyaphuphuma kule blog. Akubusise uhambo!
Asne • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 10:00 pm • impendulo
Ndimele nditsho yonke le mibuzo mkhulu kunye engabandakanywayo yokulandelana 5( Ndibona apho uya uvela nakuba, kodwa Jay-Z ayikho epholileyo defintely hayi liphole ngaphezu umntu ophilayo iNkosi.). Kubonakala ngathi defintely ukunyamekela Qinisekisa malunga nenkosikazi. Andifuni ukuba sifinyelele naziphi na izigqibo, ngathi kwakungayi kwabelwane iVangeli naye emva inkcazo ezo 4 ingqondo imibuzo kuqala. nokuba, I akuvumelani nge commenter namanye(JONREAGAN) kule blog. Ivangeli intliziyo kuphela / ingqondo-ngokutshintsha. Bekuya kuba bhetele xa weva oko kumntu(ndikucacela) ongavunyelwayo ibandakanyeka umculo(nangona nobabini wena umendo ezahlukeneyo) wazi ubunzulu nto impembelelo. Siyabonga Trip ngentumekelelo yakho ukukhonza iNkosi yethu, kukhuthaza ukuba umntu onjengam ngubani uyoyika kakhulu xa kuziwa ekwakheni ubudlelwane nabantu kunye nokwabelana iVangeli. UThixo akusikelele wena nosapho lwakho!
Asne • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 10:21 pm • impendulo
Uxolo, Ndilibele ukongeza umbuzo ukuba ndingathanda ukucela. Bekuya kuba mkhulu na ukuba ubuze wayo: Luhlobo lomculo / lyrics uyakholwa na umzali kufuneka bakhusele abantwana babo?
MichelleJ • EyoMqungu 31, 2014 ngexesha 12:57 mna • impendulo
Leyo yindlela elungileyo ukufumana ceca ingxoxo. Mna ngokobuqu fan wakhe ngokwam, kodwa bakufumanisa kakhulu kunzima ku vocally eziphilayo, efundisa nokukhuthaza kokuhlonipha zobumnini ngelixa (ngasese) jamming iingoma zakhe. Kuye kumzabalazo umzuzu, ingakumbi ekubeni Ndingu Houstonian naye KUNYE alumna esikolweni sakhe kwibakala. Ndiza yayibiyelwe, Ndithi ya!
Makube lubabalo and omnde uxolo!
Asne • EyoMdumba 1, 2014 ngexesha 12:03 mna • impendulo
Hi MichelleJ, oko kuhle kakhulu kwaye esempilweni sisilumko ngokomoya ukuba uziva convinction ebomini bakho xa kuziwa ntswela. Ndikhuthaza ukuba uthandaze feverently ukuba uYehova esusa ukuba umnqweno wokuqala siphulaphule umculo sayo ngokucacileyo anti-Kristu ngeendlela ezininzi kangaka, kulungile andifuni ukuba sugarcoat kuyo, kakhulu umculo kwakhe uSathana kodwa enomtsalane. Ndiyazi ukuba andiyi ndinixelela nantoni na ukuba awuyazi sele ngomculo yakhe anti-Kristu, kodwa ungandiva ngaphandle. ngokunjalo, omunye(ikholwa kunjalo) ngubani onokumthemba ukubamba kuwe uxanduva kwaye ucacise / balivuma uzabalazela kuye. Sonke kufuneka imizabalazo ezoyikekayo yaye ngamana uYehova kusinika ngoFefe lwakhe soyise nobunzima bethu.
P.S. Hayi ukukugwebela ukuphulaphula umculo wakhe kodwa ngezinto kuwe ukuba ngenjongo ukuzisa kulihlazo kuNdikhoyo ngokukhululekileyo ukuphulaphula kuyo phambi abantu abafuna kuwe umzekelo kaKristu njengoko. Ngamana uYehova angaba nawe.
libb • EyoMdumba 1, 2014 ngexesha 3:41 pm • impendulo
I olufana imibuzo efanayo. Abaninzi kubahlobo bam khangela phezulu uBeyoncé leyo Ukwacinga me a lot ngokoqobo. Yinto ebuhlungu ukuba sexy yinto ezilwela kuba ngenxa yempembelelo zakhe. Waba kwakhona baye bafakwa useko, ukuze abanye abantu ukuba ngathi emdala unekhono kangaka, ukuba unako ukwenza nganto… ke musa ukucinga ngento kudala esithi kunye nokwenza nendlela nezichaphazela kuzo… ngokukhawuleza nje ukuba beve uBeyoncé kuyo yonke elungileyo, kungakhathaliseki umyalezo, leyo buhlungu kakhulu. Ngoko ewe, Ndiyavuya kakhulu ukuba Trip ucela le mibuzo – emdala yabantu sifana nenxalenye kuthi kwaye kufuneka sicinge oko akwenzayo yaye ngubani yena nefuthe kangangoko uMongameli we-United States… yena ke kumajelo eendaba kanye nje kakhulu, ukuba ngaphezulu.
uNatalie • EyoMdumba 1, 2014 ngexesha 5:06 pm • impendulo
hey uhambo wazi #5 ukuba izinto phaya haaa!!!
kakuhle i bathini namkela ukuba ukukhankanya nje kakhulu Illuminati njengoko izisa cinezela embi real yayo, ukuba khona unayo nje ukubukela ubungqina dmx ngayo kuKristu noko Illuminati benza kuye ukwazi oku.
I aint esithi j-z definately na ukubandakanyeka kodwa rihanna kwaye kuye ukukopela kuba inxaxheba yawo onke kancinane ngamabonandenzile..
i love beyonce kuye UTHIXO italente ELITHILE.. sayo isiqhamo umoya wayo..
yaye njengoko i love enxila ngothando ( ingoma siqu kusuka kuye ukuze KUFANELE PRIVATE nje ngaphambi kokuba ndithethe ukubona ) i uziva yena phantsi koxinzelelo, i ngokwenene ucinga ukuba rihanna into lonke tus ukholo lwakhe, self inkolelo yakhe, kunye ukuzibona uthando ukuba sonke simele ukuba ezinye..
yena udinga imithandazo yethu!! enkosi angafuni ukuhlasela yakhe kwimibuzo yakho, i ukubulela umoya oyingcwele bahlambe wena ngobulumko endaweni izigwebo.. ithi kwi bible siya kugweba.. kodwa AmaKristu amaninzi oku xa besengxakini. usapho wam like this.. kuquka nam.. Nize Umzekelo KRISTU! god bless wena umculo wakho, inkonzo yakho ngokusebenzisa umculo god bless beyonce kuba uya kuza emva amandla omthandazo yomelele iidemon ingubo SIN!
uYakobi • EyoMdumba 1, 2014 ngexesha 10:10 pm • impendulo
'Umdla kodwa cool!
Chioma • EyoMdumba 3, 2014 ngexesha 7:05 mna • impendulo
Ngoko olumnandi yu ukuba amgwebe okanye shaya n yakhe #5 I knw ezipholileyo indlela yu're kwe Jay-Z….
Demarcus • EyoMdumba 5, 2014 ngexesha 7:47 mna • impendulo
Ndiyakuthanda kwaye andiqinisekanga ngaye lo? Kodwa akazange nobabini wayecula ecaweni okanye wadlala indima enkulu ecaweni? Ndicinga ukuba nenze oko. Ndiza ukunithandazela.
Kay • EyoMdumba 5, 2014 ngexesha 8:31 mna • impendulo
Enkosi ngokubuza imibuzo ukuba abaninzi kuthi angathanda ukuba ukubuza. Okoko iqonga ukwenza njalo, ukwazisa wena sonke. UThixo ulungile, kwaye ngenxa yokuba wathabatha ixesha ngaphandle ucwangciso bakho bexakekile ukubuza le uhlobo imibuzo ngendlela echubekileyo kakhulu, Uya kubavuza obala. Njengoko kuchazwe, nibe ungumoni, njengokuba sonke, kodwa ke ukuba uthe wamamkela uYesu njengomsindisi wakho, wena, mhlekazi, ngaba umoni ngoku ezigciniweyo ngoFefe. Amen!
Aric • EyoMdumba 6, 2014 ngexesha 9:30 mna • impendulo
Ndicinga ukuba iya isiba nempembelelo embi kakhulu mva nje, nabani na ohamba isiqingatha ze eqongeni kufuneka uhlaziye oko ekwenzeni kwabo kuloo meko. Ndiyacaphuka kakhulu Lady yethu First kuba inkxaso iimvumi ngaphezulu approiate. Obama kuyafana obuxhasayo seculier rap artist baxhasa ugonyamelo xa kufuneka ibe loo!
hamba • EyoMdumba 7, 2014 ngexesha 1:15 mna • impendulo
Ngaba greatful ngokwenene ngenxa yendlela wayakha imibuzo( ngendlela Abekho ngendlela ezigwebayo) ukuba mihle. ngoku, sidalwe ukuba iimpahla kaThixo yonqulo ngokuthi ukuphila ubomi unqulo (umthandazo, ukufunda nokucamngca ngeLizwi likaThixo, ukushumayela nokufundisa abanye uthando lukaThixo intando yakhe. Ngoko ke lets nibathandazele abo abasingqongileyo, ukuze babone ngokusebenzisa emehlweni kaThixo isimilo iindlela zehlabathi njengokuba nathi abalungqineleyo umsebenzi kaThixo.
Patience • EyoMdumba 12, 2014 ngexesha 12:13 pm • impendulo
Baninzi abantwana esikolweni sam khetha phezu kwam yaye ndiyazi ukuba beyonce bangatshintsha ukuba sifuna ukuba ngumhlobo osenyongweni wam uze esikolweni sam ukuxelela abantu ukuba nam yaye bakhe abahlobo
UJess • EyoMdumba 12, 2014 ngexesha 2:03 pm • impendulo
Nkqu uYesu wahlala ndawonye naboni.
Siza ebizwa ukuba nihambe eluthandweni kwaye sonke ukuba uKristu.
Charity • EyoMdumba 13, 2014 ngexesha 12:23 pm • impendulo
Abantu abane (umbuzo 5 ayikhange iwele ingqondo yam yonke, Ndicinga ukuba kupholile) imibuzo azihlanganisele zonke 100 yalowo endinako ngenxa beyonce.
iletha • EyoKwindla 2, 2014 ngexesha 2:57 mna • impendulo
thinkin nje isifo u esithi yall kukho omabini aboni efuna ubabalo Gods. Ngokuqinisekileyo kukwasebenza yena yaye igqibelele. Wafumana ababukeli ezininzi kakhulu n umphefumlo lula ukuyeka. Yena uya kusoloko ngakumbi kule nto ibangela le Izulu yakhe. UMtyholi apha kwaye uyikholelwa okanye hayi thats esebenza ngayo. Yena yayingesosidenge nje kuba yena satin, kodwa asinguye na ubawo waseZulwini kwaye ungaze u ngaphezulu okanye love u ngaphezu uThixo uSomandla. Enkosi
bekungeke • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 4:01 pm • impendulo
Ndiyawuthanda lo post! Le eminye imibuzo ezinkulu. Amagcisa basoloko belibala impembelelo kubantu abatsha, okanye abantu ngokubanzi, kwaye musa abaqapheli isixa xi kunye nokudideka ezinokuthi ukwazi ukuba.
Nceda uqhubeke ukuvumela uThixo ukuba usebenzise wena ndiwufeze umsebenzi aye waqala kuwe. luv.
P.S. Enkosi ngokuphendula umbuzo kutheni watshata intombi emhlophe…hleka kakhulu!
Tiffanie • UTshazimpuzi 3, 2014 ngexesha 9:55 mna • impendulo
awesome isihloko. Siyabonga ngokuba ethobela kunye nokwabelana. Sikelela wena nosapho lwakho.
Ashley D. • EyeKhala 14, 2014 ngexesha 10:29 pm • impendulo
kambe niyatyapha kakhulu!
julia atyabukile • EyeDwarha 14, 2014 ngexesha 10:08 mna • impendulo
Waaaaaaayyyyyy kuyabanda kwe JayZ. Waaaaaaaaaaayyyyyyyy.
Khankanya: UYesu Kristu Empire | Umfundisi-rap Trip Lee Talks Calling loLutsha ukuba 'Vuka’ belungiselela Fans kwi kwiNqanaba Personal (yokuzonwabisa)
Khankanya: Pastor-Rapper Trip Lee Talks Calling Youth to 'Rise' belungiselela Fans kwi kwiNqanaba Personal (yokuzonwabisa) - Social News Dashboard
Jonga ngesondo ngokuBonisa • EyeKhala 29, 2019 ngexesha 2:18 pm • impendulo
Inqaku elihle kakhulu. Ndiyithanda ngokupheleleyo le nto